बिरुपको उच्छेद का कारणहरू | Noti बिरालाहरू
बिचको बिल्ली का कारण
हामी हाम्रो बिरालोलाई धेरै माया गर्छौं र हामी ऊ पनि सँधै राम्रो भएको चाहान्छौं, तर कहिलेकाँही समस्याहरू यसलाई महसुस नगरीकन उत्पन्न हुन्छ, र त्यो हो जब हामी वास्तवमै उसको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छौं। ती एक नराम्रो आश्चर्य को एक छ बिचको बिल्ली, कि छ कि अत्यधिक कपाल झर्ने कि तपाइँको शरीर को केहि भागहरु मा गंजेपन पैदा गर्न सक्छ।
कपालमा कपाल झर्नुमा बिभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् जस्तै छाला संक्रमण (दाद, परजीवी) वा अन्य कारणहरू। बिरालाले कहिले काहिं धेरै धेरै सफा गरेर कपाल झर्ने समस्या गर्दछ किनकि यो एलर्जीको कारणले वा यसको कोटमा परजीवीहरू भएको कारण खुजली महसुस गर्दछ।
1.3 कुशिंग रोग
1.5 फ्लाई काटने
1.6 थाइरोइड समस्या
त्यहाँ समय छ बिरालाहरू जसको जोर्नीहरूमा दुखाइ छ उनीहरूको शरीरको कपालविहीन भाग पनि हुन सक्छ यो च्यातेर बन्द गरेर उसको रोगलाई शान्त पार्न। तनावपूर्ण बिरालाहरूले पनि खालित्य पाउन सक्छ किनभने तिनीहरू आफैंलाई धेरै र धेरै चोटि दुलहाउँछन्। यो तनावको चिह्न हो र यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको बिरालाले यो पाएको छ भने तपाईंले आफ्नो घरमा फेरि शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, जब बिराला धेरै नै तयार हुन्छ, यसले यसको भन्दा बढी कपालमा बान्ता गराउन सक्छ, र अत्यधिक कोषमा धेरै कपाल निगल गरेर पनि भारी पाचन हुन सक्छ।
साथै, हार्मोनल समस्याहरू पनि छन्यिनीहरू दुर्लभ भए पनि, तिनीहरूले बिरालाहरूमा पनि कपाल झर्न सक्छन, यदि तिनीहरूले खुजली गरेनन् र तिनीहरूले त्यस कपाललाई बाहिर तानिदैनन् भने पनि।
यो सतर्क हुनु आवश्यक छ कि त्यहाँ बिल्ली कालोपनीका केहि कारणहरू छन्, जस्तै दाँत, जो मानिसहरूलाई सार्न सकिन्छ र यसैले, यसलाई यथासक्दो चाँडो उपचार गर्न आवश्यक हुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन यसले निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई कसरी कार्य गर्ने भनेर जान्नको लागि छुट्टै हेर्नेछौं। केवल यस तरिकाले, तपाईं द्रुत कार्य गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंको बिरालोलाई कुनै कारणको लागि खालितोपना हुन सक्छ जसलाई सकेसम्म चाँडो चिकित्सा सहायता चाहिन्छ।
याद नगर्नुहोस् सब भन्दा साधारण कारणहरू के के हुन् र त्यसैले तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि कसरी कार्य गर्ने भनेर यदि माथि उल्लिखित यहाँ केहि तपाईंको बिरालोमा भइरहेको छ भने।
यी साना जीवहरूले बिरालोलाई टोक्छन् धेरै खुजली को कारण। यति धेरै खरोंचबाट, तपाईं केशविहीन क्षेत्रहरूको साथ अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले जनावरहरूलाई धेरै नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ, किनभने किराँस झैं हुन सक्छ खुजलीर एक प्रकारको छ, इयर मंगेज, जुन बिरालाबाट बिरालोसम्म र बिरालोबाट मानव दुबै संक्रामक हुन्छ।
उपचार समावेश एन्टिपेरासिटीक्समा राख्नुहोस् जुन माइट्स हटाउँछ, र यदि तपाईलाई खुजली आयो भने जनावरको औषधि नसा माझ दिनुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई मेट्न सक्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवश, बिरालालाई पनि एलर्जीको केही प्रकार हुन सक्छ, जो एक किसिमको खालको कारण हुन्छ खाना र वातावरणीय। पहिले केहि खानेकुराहरूको सेवनको कारण हो जुन उनीहरूले राम्रोसँग पचाउन सक्दैनन, जस्तो कि अनाज जसमा सामान्यतया धेरै फिड हुन्छ, र जसले सानो क्षेत्रमा छालाको रातोपन निम्त्याउँछ, तर जुन शरीरको बाँकी भागमा फैलिन सक्छ।
वातावरणमा एलर्जीनहरू सार्न, जस्तै परागकण वा धूलोकोट, पछाडि पनि लाग्न सक्छ।
उपचार मिलेर बनेको छ बिरालालाई त्यो एलर्जीबाट टाढा राख्नुहोस् जसले गर्दा खुजली र असुविधा हुन्छ।
यो ग्रन्थुलर डिसअर्डर हो जुन एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्टेरोइड हर्मोनको उत्पादनको विशेषता हो। सब भन्दा सामान्य लक्षण मध्ये एक हो सममिति ढाँचामा कपाल झर्नु.
दुर्भाग्यवस, यस रोगको लागि अझै कुनै खास उपचार छैन। औषधी प्राय: आहारमा परिवर्तनको साथ मिल्दछ।
बिरालो जनावर हो धेरै समझदार, बिन्दुमा कि तनाव, ऊब वा घर मा हुने परिवर्तनले कपाल झर्ने काम गर्दछ। यसबाट बच्न, जनावरलाई शान्त राख्नुपर्दछ, यसलाई योग्यको रूपमा चाहानुहोस् र जस्तै उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस् फेलिवे यदि तपाईं एक तनावपूर्ण अवस्थाको माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने (उदाहरणका लागि पशु चिकित्सकमा जानु जस्तै)।
यो सबै भन्दा साधारण हो। एउटा झींगाले बिरालोलाई टोक्छ, र यसले आफैलाई खार्जेको परिणामस्वरूप खरोंच गर्दछ। सामान्यतया यो गम्भीर समस्या होइन, तर यदि पशुसँग धेरै छ भने, तपाईं आफ्नो छालामा स्केब र स्केलको साथ अन्त गर्न सक्नुहुनेछ.
यसको उपचार सरल छ। समावेश गर्दछ एक antiparasitic राख्नुहोस् -as पिपेट, कलर, स्प्रे- वा पशु चिकित्सकले सिफारिस गरेको गोली दिनुहोस् तपाईं तिनीहरूलाई मेटाउन को लागी। गम्भीर अवस्थामा, बिरालालाई विशेष शैम्पूले नुहाउनु आवश्यक पर्दछ, पेशेवरले सिफारिस गरेको पनि।
बिरालामा कपाल झर्नु भन्ने संकेत हुन सक्छ कि थाइरोइड ग्रंथि ठीकसँग काम गरिरहेको छैन। यस बिचमा हाइपरथायरायडिजम वा हाइपोथायरायडिज्म हुन सक्छ जुन रोग हो जुन हुन सक्छ flaking र alopecia.
उपचार मिलेर बनेको छ तपाईंलाई हर्मोनहरू दिनुहोस् ताकि ग्रंथि आफ्नो कार्य पूरा गर्न फिर्ता।
सबै भन्दा पहिले पशु चिकित्सकले अनुसन्धान गर्नु पर्छ कि के कारणहरू छन् जुन तपाईंको बिरालामा एलोपेसिया पैदा गर्दैछ। कारणमा निर्भर गर्दै, उपचार फरक हुनेछ, किनकि एक फ्लाई उपचार दादुको उपचार जस्तै छैन, उदाहरणका लागि।
यदि, उदाहरणका लागि, पशु चिकित्सकलाई शंका छ कि तपाईंको बिरालोलाई खालित्य छ किनकि उसले यो व्यवहार व्यवहारको कारण गराउछ, तपाईंले ती तनाव ट्रिगरहरूमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ जो पीडित हुन र सकेसम्म चाँडो उपचार खोज्न सक्छ। प्रयास गर्नुहोस् कि तपाईंको बिरालोले तपाईंलाई घर भित्र शान्ति भेट्न सक्छ।
यदि परावर्तन पछि तपाईलाई अझै थाहा छैन किन तपाईको बिरालाले कपाल झर्दै छ भने, त्यसो गर्नु तपाईको पशु चिकित्सकमा जानु जरुरी छ तपाईलाई डर्मेटोलजीको विशेषज्ञता छ।
सामान्यतया, अल्पोशिया अजीब चीज सधैं यसको कारणमा निर्भर हुन्छ जसले यसलाई उक्साउँछ। यो फ्लाई, परजीवी, तनाव ... वा अन्य समस्याबाट हो कि होइन भन्नेमा निर्भर गर्दछ। यसको कारण चाँडो भन्दा चाँडो हुने उपचार आवश्यक छ।
तर यो कुरा सम्झनुहोस् कि त्वचा विशेषज्ञमा पशुचिकित्सासँग परामर्श लिनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि उही एक हो जसले तपाईलाई तपाईको कट्टरपट्टि मा के भइरहेको छ को कारण पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यदि यो तनाव वा भावनात्मक समस्या पनि हो भने यो एक राम्रो विचार छ जान्न को लागी के हुँदैछ जान्नको लागि एक पशु व्यवहार विशेषज्ञमा जानुहोस् र जतिसक्दो चाँडो उपचारात्मक विधिहरूको साथ सुरू गर्नुहोस्।
हामीले हेरेका थियौ, बिचको बिलोपिया स a्केत हुन सक्छ कि बिरालाले राम्रो महसुस गरिरहेको छैन। यदि तपाइँ श suspect्का गर्नुहुन्छ कि तपाइँको साथीसँग केहि गलत छ भने, उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिचको बिल्ली का कारण
नमस्कार, मेरो बिरालोमा खालित्य छ, तर मलाई थाहा छैन कुन सहि प्याथोलॉजी हो, त्यसैले मैले यो पढ्न सकिन किनभने यसको डाईट वा एलर्जीको कारण उनीहरूले मलाई मद्दत गर्न सक्दछन्:
ऊ आफ्नो पछाडि रहेको छ उसको छाला को छाला फुलेको र धेरै खुजलाउने तर धेरै उसले आफ्नो कपाल तान्छे र चाट्छ र चाट्छे र कहिलेकाहीं म उनको सुतिरहेको देख्छु र अचानक ऊ उफ्रन्छ, दगुर्छ, घुमाउरो छ, उसको खुट्टा हल्लाउँछ, र फैलिन्छ खुट्टा को क्षेत्र मा, त्यसैले कुरा गर्न, म भाग्यो र यो पागल हो यो देखेर यो
म तपाईंलाई सिफारिस गर्छु उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। यो स्पष्ट छ कि उसले धेरै नराम्रो समय गुमाइरहेको छ।
केवल पशु चिकित्सकले तपाइँसँग के छ र यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउन सक्षम हुनेछ।
तपाईंको लेख धेरै अपूर्ण छ र धेरै गम्भीर त्रुटिहरू छन्। लाइनको हाइपोथायरायडिजम अवस्थित छैन र अर्कोतर्फ, यदि यो एक हाइपरथायराइड पशु हो भने, यो हर्मोनको औषधीको रूपमा प्रयोग गरिदैन ताकि ग्रन्थि फेरि काम गर्दछ, किनकि समस्या अत्यधिक रूपमा काम गरिरहेको छ। एक विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस्।
किन मेरो बिराला उत्सुकताले खान्छ?
बिरालोको आत्मविश्वास कसरी प्राप्त गर्ने?